1-4mL Autosampler ezineengqayi Kuba solibalo, UPLC, C.
16mm, 25mm Test Tube Ngokuba Uhlalutyo Water COD, FTU
6-20mL GC HEADSPACE ezineengqayi
8-60mL EPA Ukugcinwa ezineengqayi
Solibalo ngesirinji lokucoca ulwelo
Zhejiang Aijiren Technology, Inc yinkampani ehlabathini yobomi-science, imichiza, ziphele elebhu, njl iimveliso yethu ephambili yokusebenza eliphezulu ulwelo chromatography & chromatography gas njengamanzi Chromatography Autosampler ezineengqayi kunye ukuvalwa, izinto ezifakelwa, crimper isirinji okucoca, etc; Uhlalutyo Water njengamanzi COD ityhubhu yovavanyo.
Zhejiang Aijiren Technology, Inc. ziye ndise kumazwe angaphezu kwe-70, ibandakanya ngaphezu kwama-2000 abathengi kulo lonke ihlabathi. 120 abasebenzi, 100,000 igumbi udidi lokucoca, ISO, GMP & Bureau Veritas aqinisekisiwe, le indlela ukugcina kwizinga eliphezulu kunye namaxabiso aphantsi kubathengi eyaziswa jikelele.
Ishishini isiko "Umgangatho kuqala, kwaye ninikele egqibeleleyo." ukukhuthaza The Aijiren ukuba kwakusasa, kwaye kwakhona inkxaso I-Aijiren ukusebenzisana innovation.It na izibophelelo zethu zoshishino uthembisa ukunika iimveliso ezikumgangatho ophezulu inkonzo elungileyo kubathengi bethu. "Ngokuqhubekekayo ekuphuhliseni iimveliso ezintsha ukwanelisa iimfuno zabasebenzisi" injongo wethu. inkampani yethu ukulungele ukuhlola imarike enkulu China kunye namazwe angaphandle, nifune uphuhliso eqhelekileyo kwintsimi elitsha lomsebenzi. 70 ekhulwini iimveliso zithengiselwa Europe kunye gasket market United States. Ukutyhubela iminyaka engaphezu kweshumi wophuhliso kunye neenzame, kwabelwane nokusebenzisana namasebe technology lwenzululwazi amaninzi apha ekhaya nakumazwe angaphesheya, sisungule ngempumelelo iindidi ezahlukeneyo ezineengqayi autosampler esetyenziswa ngokukodwa kushishino elebhu kunye nohlalutyo. Sinako zalezo-eyenziwe elebhu consumables iimveliso kunye kwizinga eliphezulu kubathengi kulo lonke ihlabathi, oko kunokukunceda woyise iingxaki kwangaphambili xa kusenziwa amalinge elebhu.
inkolelo kunye nomnqophiso Aijiren, yaye sisiseko sophuhliso yethu.
Wamkelekile ukuba bahambele nokubambisana!